UNHCR oo xero u furaysa qaxootiga Ivory Coast - BBC Somali
UNHCR oo xero u furaysa qaxootiga Ivory Coast
6 Jannaayo 2011
Image caption Boqolaal qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhashay doorashada lagu muransan yahay ee Ivory Coast
Hayadda Qaranada Midoobay ee qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay inay xero cusub ay uga furayso dalka Liberiya kumanyaal qaxooti reer Ivory Coast oo xuduuda ka soo gudbaya.
Afhayeenka Hay'adda ee Liberiya ayaa sheegay in ilaa labaatan iyo saddex kun oo qaxooti ayaa ka soo gudbay xudduuda tan iyo intii ay bilaabmatay doorashooyinka lagu muransan yahay Ivory Coast.
Wafdi ka kooban hogaamiyayaasha Afrika ayaa la kulmay Madaxweynaha Nigeriya Jonathan Goodluck toddobaadkan, si ay ugu sheegaan inay ku guul daraysteen inay ka dhaadhiciyaan Madaxweyne Lauren Gbagbo inuu xukunka ka dago.
Madaxweynaha Nigeriya Johnathan Goodluck oo hadda ah gudoomiyaha urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS, ayaa sheegay in wadahadalada ay sii soconayaan.
Urur goboleedka Ecowas ayaa u hanjabay inay xoog milatari isticmaalayaan haddii uu madaxweyne Gbagbo xukunka ka dagi waayo.
Laakiin wariyaha BBCda ee Abidjan ayaa sheegaya in urur goboleedka ECOWAS aysan lahayn askar diyaar u ah oo xoog leh oo si dhaqso ah lagu howl galin karo, wadamo badan oo ka mid ah ururkana ay dadkooda ay degan yohiin Ivory Coast kuwaasoo la kulmi kara dhibaatooyin badan.